Safety na Protection Soft board - China Fastpcba Technology
Anyị na-enyere ndị ụwa na-eto eto ebe 1983
email Nkwado 0755-26978877
ulo oru akpaaka
ọgụgụ isi home
ọgwụ na ahụ ike na ngwá electronic
Safety na Protection
Safety na Protection Soft board
ike nkwukọrịta PCB
ulo oru akpaaka ada
FASTPCBA Technology Co., Ltd bụ ọkachamara PCB emeputa ke China, Shenzhen. Na afọ 14 nke mmepe, FASPCBA amama n'ime a mbụ na klas emeputa nke HDI PCB, na mmepụta ikike 35,000 square mita. FASTPCBA na-enye elu àgwà iferi PCB na PCB nzukọ ije ozi, gụnyere mmiri sourcing, ọrụ ule, conformal mkpuchi na zuru nzukọ maka ahịa n'ụwa nile. Anyị ike ike azụmahịa aghụghọ na-enyere anyị aka ịnapụta elu mpi ọrụ maka anyị ...
FASTPCBA Technology Co., Ltd bụ ọkachamara PCB emeputa ke China, Shenzhen. Na afọ 14 nke mmepe, FASPCBA amama n'ime a mbụ na klas emeputa nke HDI PCB, na mmepụta ikike 35,000 square mita. FASTPCBA na-enye elu àgwà iferi PCB na PCB nzukọ ije ozi, gụnyere mmiri sourcing, ọrụ ule, conformal mkpuchi na zuru nzukọ maka ahịa n'ụwa nile.
Anyị ike ike azụmahịa aghụghọ na-enyere anyị aka ịnapụta elu mpi ọrụ maka anyị iche iche, asọmpi ahịa isi. Site na nke a atụmatụ, anyị nwere ike ime ka ngwa ngwa, mgbanwe mkpebi omume na-agbanwe agbanwe ahịa na ọnọdụ na ike kasị uru ma uru n'ihi na ndị ahịa.
Ma Service, anyị na-enye 7days 24hours na-akara ọkachamara Nga ire, ere na Mgbe Ọ Malitesịrị-Sale ọrụ dozie ajụjụ ọ bụla banyere iji. Oge ọ bụla, ọ bụla chọrọ ga-ozugbo-aza anyị a zụrụ nke ọma na enyi na enyi support mkpara.
Anyị isi ahịa bụ Europe, n'ebe ugwu USA, Australia, South America, na Asia. anyị ga-etinye ihe ndị ọzọ mgbalị iji zụlite njikọ na ahịa na ndị ọzọ ebe. All na anyị chọrọ ime, bụ jikọọ ụwa site anyị na ngwaahịa, na-ekerịta uru, Happyness na ihe nweta na ahịa.
PCB na SMT nzukọ na onye-nkwụsị ọrụ
FR4, elu TG FR4, elu ugboro, alum, FPC
Number nke n'ígwé
Min.thickness maka n'ime n'ígwé
(Cu ọkpụrụkpụ na-ekwe)
Single / ugboro abụọ: 0,008 ± 0,004 "
Bow na ighikota
Ọla kọpa ibu
Elu Cu ibu
Ne Cu ibu
malite ịgba ndiiche
PTH oghere ndidi
NPTH oghere ndidi
Green, na-acha ọcha, nwa, red, acha anụnụ anụnụ ...
Min solder nkpuchi clearanace
ọcha, nwa, odo, acha anụnụ anụnụ ...
100% Ọtọ ule
X-ray, AOI Test, Ọtọ ule
Ndidi nke PCB
Max size of imecha board
HASL, ENIG, imikpu silver, imikpu tin, OSP ...
Square, gburugburu, oge ufodu (na jigs)
Plastic, metal, na ihuenyo
Q1: Gịnị ọrụ unu nwere?
FASTPCBA: Anyị na-enye turnkey ngwọta tinyere PCB Ụgha, SMT, plastic injection & metal, ikpeazụ nzukọ, ule ndị ọzọ uru-kwukwara ọrụ.
FASTPCBA: anyị PCB / PCBA ọrụ ndị tumadi maka ọrụ gụnyere Medical, Automotive, Communication.
Q4: nwere ike anyị inyocha àgwà n'oge mmepụta?
FASTPCBA: Ee, anyị na-emeghe na uzo na onye ọ bụla mmepụta usoro na bụla na-ezo. Anyị n'anabata ndị ahịa inyocha anyị mmepụta usoro na-elele na ụlọ.
FASTPCBA: Anyị dị njikere banye NDA mmetụta site ahịa n'akụkụ obodo iwu na ekwe na-ahịa data na elu nzuzo larịị.
FASTPCBA: N'ihi na PCB kwuru, biko nye Gerber data / faịlụ na nke na-egosi yiri oru chọrọ nakwa dị ka ọ bụla pụrụ iche chọrọ ma ọ bụrụ na i nwere.
N'ihi na PCBA kwuru, biko enye Gerber data / faịlụ na-BOM (ụgwọ nke ihe), na ọ bụrụ na ị mkpa ka anyị na-eme ọrụ ule, biko-enye ule ntụziaka / usoro.
FASTPCBA: nzipu okwu nke EXW, FCA, FOB, DDU wdg na-niile dị dabeere na onye ọ bụla see okwu.
FASTPCBA: Nọmalị 24 awa 48 awa ka anya dị ka na-enweta esịtidem engineer inwale nkwenye.
FASTPCBA: Mba, anyị enweghị MOQ chọrọ, anyị nwere ike na-akwado gị oru ngo malite prototypes ka uka nwetara.
Previous: Ike ọkọnọ Soft board
Circuit Board Ụgha
Omenala Circuit Board
Omenala E Bipụtara Circuit Board
N'onwe Circuit Board
Kọmputa Board Assembly
Kọmputa Board Manufacturers
Kọmputa Circuit Board
Kọmputa Circuit Board Assembly
Electronic E Bipụtara Circuit Board
Mgbanwe Circuit Board
Mgbanwe E Bipụtara Circuit Board
Olee otú Iji Mee A Circuit Board
Dugara Circuit Board
E Bipụtara Board Assembly
E Bipụtara Circuit Board
E Bipụtara Circuit Board Assembly
E Bipụtara Circuit Board Assembly Companies
E Bipụtara Circuit Board Assembly Services
E Bipụtara Circuit Board Company
E Bipụtara Circuit Board Cost
E Bipụtara Circuit Board Design
E Bipụtara Circuit Board Ụgha
E Bipụtara Circuit Board Manufacturers
E Bipụtara Circuit Board prototype
E Bipụtara Circuit Board Supplier
E Bipụtara wiring Board
Prototype E Bipụtara Circuit Board
Obere Circuit Board
Jikọtara Circuit Boards
ọgwụ na ahụ ike na ngwá electronic ada
ọgụgụ isi home Soft board
Ike ọkọnọ PCB
ike nkwukọrịta Soft board
Ike ọkọnọ ada
Industrial akpaaka Soft board
Nke a na atụrụ bụ a Micro niche maka azụmahịa na edemede, ya bụ Petro - Industrial HTML Template. e nwere onye na ngafe nke a template na-eji HTML / CSS.
Gịnị bụ ihe ndị metụtara ọjọọ PCBA ...
Gịnị bụ iwu nke PCB layout na t ...
Olee otú ogologo bụ SMT kwuru okirikiri maka t ...